Daawo :Sawirro murugo badan oo Manchester United oo Old Traffor ku xustay Xiddigihii ka dhimatay 60 sano kahor » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ England/Daawo :Sawirro murugo badan oo Manchester United oo Old Traffor ku xustay Xiddigihii ka dhimatay 60 sano kahor
Daawo :Sawirro murugo badan oo Manchester United oo Old Traffor ku xustay Xiddigihii ka dhimatay 60 sano kahor
Maanta oo kale Sanadkii 1958 dii waxaa dhacay masiibo kadib markii ay bur burtay diyaarad sidey Cayaartoy Manchester United ah iyo dad rakaab ah waxaana ay ku dhacday meel u dhow Magaalada Munich ee dalka Jarmalka.
Diyaarada ayaa dhacday xili kooxda Manchester United ay ka soo laabnaysey Magaalada Belgrade oo ay ku soo Cayaareen kulan ka tirsanaa koobka Horyaalada yurub waxaana shilkaas ku dhintay 23 qof oo ay kuireen 8 ka mid ah Cayaartoydii safka hore ee kooxda Man United.
Waxaa Manta la Xusay Sanad Guuradii 60 aad ee ka soo wareegtay shilkaas waxaana Mancheter United Masiibadaas kadib ku adkaatay in ay kasoo kabtaan Cayaartoyda ka geeriyootey bale Sanado ka dib ayey ku soo laabteen masraxyada yurub iyo Horyaalka England.
Cayaartoyda iyo dadka rakaabka ah ee Geeriyoodey ayaa ku duulayey diyaarada British European Airways (BEA) waxaana Xiddigaha geeriyoodey kulankii ugu danbeeyey ee England ku Cayaaraan ladheeleen kooxda Arsenal kulan ka dhacay Garoonka Highbury.oo ay daawanayeen 63,578 Man United ayaana ku badisay 5-4 Gool.
Goolasha ay ku badiyeen Manchester United waxaa kala dhaliyey Tommy Taylor (2), Charlton, Duncan Edwards iyo Dennis Viollet.kuwaas oo qaarkood ay ku geeriyoodeen shilkii dhacay 6 dii bishii labaad Sanadkii 1958 dii,
Sawirkaan hoose waxaa laqaaday 5 tii bishii February Malin kahor intii aysan Geeriyoon Cayaartoyda Manchester United waxayna kusugnaayeen Magaalada Belgrade oo ay ka soo laabnayeen.
Baroordiiqada loo sameeyey cayaartoydii Manchester United ee Talaadadii lagu xusay Old Traffor waxaa Goob joog ka ahaa Madaxda Naadiga Macalinkii hore ee Sir Alex Ferguson Jose Mourinho iyo qaar ka mid ah Cayaartoydii ka bad baaday shilka diyaaradeed oo uu ka mid ahaa Sir Bobby Charlton.
Magacyada Cayaartoydii iyo Madaxdii ku dhimatay shilkii diyaaradeed ee Manchester United.
Magacyada Cayaartoydii iyo dadkii kale ee ka bad baaday shilkaas?
George William ‘Bill’ Rodgers, radio officer
DEG-DEG: Ronald Koeman oo loo Magacaabay Tababaraha Xulka Holland
Rafael Nadal oo kahadlay Xaalada adag ee kooxda uu sida weyn u taageero Real Madrid.